IFlora yase Yurophu - Imbewu ne zityalo ziyathengiswa - KPR uMbutho wabalimi beGadi
Okwangoku, siqokelela iimbewu nezityalo ngesicelo(kwakunye nengxenye yezityalo- umzekelo iingqumba, izichwechwe, meristematic tissues, isichumiso esityheli sentyantyambo, etc.) kwintlobo ngentlobo ezingaphezu kwe 4000 zezityalo kumazwe asYurophu ali 19.
Ngoku siqokelela kulamazwe alandelayo iAustria, iBulgaria, iCzechia, iJamani, iSpain, iFinland, iGreat Britan, iCroatia, iHungary, iLithuania, iLatvia, iMontenegro, iMacedonia, Poland, Portugal, Serbia, Russia, iSlovenia, iSlovakia
Silungiselela ukuqokelela kulamazwe alandelayo: iAlbania, iBosnia ne Herzegovina, iBelarus, iEstonia, iFrans, iSwitzerland, iItaly, iKosovo, Norway, Sweden, Ukraine
Cofa ukwenza mbaxa imephu
Siyakwazi ukuqokela zonke intlobo kwesisixeko ngesicelo sakho. Kodwa, asiziqokeleli intlobo ngentlobo ezikhuselweyo kwi orchids (Orchidaceae).
Ukusukela ngo 2002 sinikezela njalo ngonyaka, ngokwahlukeneyo kakhulu nge zityalo ezininzi zase Yurophu kubalimi basekhaya nabangphandle begadi abancinci nabegadi abaninzi bemibutho, nakwinkampani zeKhemisti nakuphando ngezenkcubeko.
uKususela kuKwindla ukuya kwiDwara lixesha lezityalo eYuropu. Kuqheleke ngeyeThupha ukuya kweyoMsintsi ukuvunwa kweMbewu, ezinye intlobo kube phambi koko. Sinikezela ngesiqinekiso seminyaka emibini sokuhluma kwembewu. Imbewu zezinye intlobo ziyafumaneka unyaka wonke, kodwa ezinye intlobo ziyaqokelelwa ngesicelo. Ukuba uzingela nantonina eYuropu, ufike kwindawo elungile! Sithinte ukuzazela okukhoyo, amxabiso nemiqathango yokunikezela.
Siyakwazi ukunikezela ngazo zonke iparts zezityalo kunye nembewu, iingqakumba, izichwechwe, meristematic issues, pollen nezinye. Sikwakhulisa nentlobo ezininzi sizilungiselela ukuzithengisa njengembewu nezityalo ezisencinane sizithegisele abathengisi abathenga ngobuninzi beza kuthengisela abanye abathengisi. Xa ngaba ufuna imbewu, i odolo yakho kufuneka yenziwe pambi koTshazimpunzi, ngokubona ukuba imbewu ilinywa ngo Tshazimpunzi.
Sinikeza ngesaphulelo kubathengisi abathenga ngobuninzi beza kuthengisela abanye abathengisi. I satifiketi se Phytotosanitary ne satifiketi se Origin sezityalo zinikezelwa ngesicelo.
Iindlela yokufumana iintlobo ze Flora yase Yurophu
1. Sithumele i i-imeyile (okulungileyo phambi koTshazimpunzi)enoluhlu lwentlobo ezifunekayo uze uncede ufakele nezinkcukaca zilandelayo:
- Izinto ozifunayo (Imbewu, Izityalo, Ingqukumba, nemimchwezo etc.)
- Ubuninzi (zingaphi izinto, ngokomlinganiselo okanye imbewu ekaliweyo, zingaphi izityalo, imichwezo...)
-ukuba unezinto ezibalulekileyo ozifunayo (umzekelo ulwazi ekufuneka lunikeziwe ngendawo, okanye imbewu ebuya kumazwe athile kuphela okanye imbewu ezakuqokelelwa kwindawo ezahlukeneyo okanye emazweni nakanjalo.)
Ukuba ufuna intlobo ethile engaxelwanga kule website, kwaye uqinisekile, ukuba indalo yayo ikwelinye lamazwe esiqokelela kuwo, nceda ke ngoko usixele igama layo le Latin.
2. Siza kukuthumelela nge i-imeyile uluhlu lwentlobo e:
- Siyakwazi ukukuthumelela ngokukhawuleza kuba sinazo kesizibekileyo okanye kwezikhuliswayo (kwakhona ungayikhangela kwivenkile yethu kwibanki yethu)
- Siyakwazi ukuqokolela okanye ukukhulisa lehlobo elizayo – ukuba okwangoku intlobo efunekayo ayikho kwesizibekileyo okanye kwesizikhulisayo
Okokuqala sizakuthumela nge i-imeyile uluhlu lwamaxabiso kwelixesha (amaxabiso ethu ayashiyana asusela 0, 50-1, 50 eYuro nge pakethi enye yembewu). Ukuba uyakwamkela esikunika kona, into oyithengile izakuthunyelwa kuwe nje xa singafumana imali othenga ngayo.
3. Ukuqokelela ngesicelo esibalulekileyo
Intlobo ezingekho kwesizibekile, ziyakuqokelelwa ngesicelo esibalulekile. Siyakuyigcina into oyifunayo kuvimba wethu saye siyakukuxelela ngokukhawuleza sakuba sikwazile ukuqokelela intlobo ozifunayo, ngokunjalo nangamaxabiso azo. Amaxabiso axhomekeka kwindleko zokuqokelela imbewu, ekuyicoceni nasekuqinisekiseni ukuba iyiyo intlobo elungile (ukuba indlela yokuqinisekisa intlobo efunekayo iyasokolisa). Xa nje ungamkela ixabiso lethu sifumane nemali othenga ngayo imbewu, siyakuyiqokelela kwangoko siyithumele kuwe. Ukuba ngaba ixabiso lethu alamkelekanga kuwe okanye awunamdla kwezi ntlobo, akukho nto ezakwenzeka – Awunyanzelekanga ukuba uzithathe ezimbewu ne oda yakho sizakuyicama.
Xa ngaba asikwazi ukuqokelela lentlobo efunwayo kweli xesha lonyaka (kude kube sekupheleni kweyeNkanga), asizukwazisa ngayo nakuluhlu lwezinto esazisa ukuba sinazo sizakuyisusa. Ngako ke, xa ungafumani impendulo evela kuthi nge i-imeyile phambi kokuphela kweyoMnga ube usanqwenela uku oda, siza kuzama ukuyiqokelela imbewu kwihlobo elizayo. Kodwa ke kuzakufuneka uphinde uthumele uluhlu lwezinto ozifunayo nge i-imeyile phambi koTshazimpunzi.
Uluhlu lwentlobo esingaziqokelela
Awukwazi ukufumana iimbewu okanye izityalo ozifunayo kuluhlu lwethu? Sazise iimfuno zakho sakuzama ukukuthumelela zona.